VaDonald Trump vachitaura kuUnited Nations musi wa 19 Gunyana, 2017, mu New York.
Mutungamiri we America, Va Donald Trump, nemusi weChipiri vakataura kumubatanidzwa wenyika dzepasi pose we United Nations General Assembly vachishoropodza zvikuru nyika dze Iran, Afghanistan, Venezuela ne North Korea.
VaTrump vakati musangano we United Nations uyu wakange uchiitwa panguva iyo nyika dzepasi rose dzisina kumira zvakanaka nepamusana pedzimwe nyika dzavakati dzinokonzera nyonga nyonga pasi pose dzichibatsira mapoka anopfuuridza mwero.
VaTrump vakadoma nyika dze Iran neSyria vachiti dzinobatsira zvikwata zvinopfurikidza mwero uye vakadoma mutungamiri we Venezuela, Va Nicholas Moduro, semutungamiri auraya nyika yake nenyaya yekutevedza nzira yegutsa ruzhinji.
Pa North Korea, VaTrump vakati kana nyika iyi ikaramba ichiita zvairikuita, America ichasara isina zvokuita kunze kokuparadza nyika iyi.
Va Trump vakati nyika dzese dzinofanira kukudza zvido zvevanhu vadzo vakapamhidzira zvekare vachiti kubudirira kwesangano reUnited Nations kunoitika chete nekubudirira kwakazvimirira uye nekusimba kwenhengo dzesangano iri.
Vakatiwo kuti tikunde zvimhingamipinyi zvatakatarisana nazvo parizvino, uye kubudirira kwevimbiso yeremangwana redu, tinofanirwa kuita izvi nenjere dzezvakaitika kare zvatinoziva, uye kuzvimirira kwenyika dze United Nations, kusumudzira runyararo nebudiriro kwenyika idzi pachazvo, uye budiro yenyika dzepasi rose.
Vachizeya mashoko aVaTrump avakataura kuUnited Nations, chimwe chizvarwa che Zimbabwe chinogara mu America, VaPromise Sande, vakati mashoko aVaTrump haana kuvafadza nekuti vakange vachifanira kutaura zvakawanda pamusoro pe zvirikuitika kuAfrica, zvikuru sei pamusoro pezvinhu zvizhinji zvisina kufanira zviri kuitwa nevatongi vekuAfrica.
VaTrump Vanotaura kuUnited Nations